Intatheli isongelwa yiGeorgia inomyalezo kubathunywa be-UNWTO: Vota NO
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » Intatheli isongelwa yiGeorgia inomyalezo kubathunywa be-UNWTO: Vota NO
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziPhukileyo zaseGeorgia • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zeShishini lokuhlangana • abantu • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Emva kokubanga ukuba ufumene izoyikiso zokubulawa eGeorgia, uFrank Tetzel, uMhleli kwiNtloko yezoQoqosho, ushicilelo olukhokelayo lwaseJamani olusekwe eBerlin, namhlanje ukhuthaze abathunywa abazimase iNdibano Jikelele ye-UNWTO e-China kwiveki ezayo ukuba bavote HAYI kuNobhala-Jikelele we-UNWTO. Isiqinisekiso sePololikashvil. UFrank Tetzel ukwayintatheli yophando kuhlelo lwaseJamani lweHuffington Post.
UTetzel namhlanje ukhuphe ileta evulekileyo eya kubo bonke abathunywa be-UNWTO. Ngaba umbono wakhe wenza ityala elomeleleyo lokungavumi uNobhala-Jikelele onyuliweyo, uZurab Polikashivil?
Ngokukodwa, u-Tetzel, ongummi wase-Jamani, uthetha nabathunywa baseJamani kwi-UNWTO General Assembly kunye nabezopolitiko kwezokhenketho eJamani ukwazisa abantu ngobuqhophololo bonyulo eGeorgia uqhubeka nokuzibandakanya ekuqinisekiseni ukuba umgqatswa wabo uyaqinisekiswa kwiveki ezayo kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo. UChengdu.
Njengenxalenye yamaphepha-ndaba asimahla aseJamani, uTetzel usebenze ngokuzimisela okukhulu kumgqatswa waseGeorgia njengenxalenye yemvelaphi yamanqaku ahambelana nokhetho lukaNobhala Jikelele we-UNWTO. UTetzel ufumene ingqalelo engaqhelekanga kwizisongelo ezivela kubantu baseGeorgia, ngethemba lokudimaza indlela yakhe yokufunda okungakumbi malunga nePolikashivili kunye nexesha lakhe elidlulileyo.
Inqaku likaTetzel kunye neleta evulekileyo yapapashwa namhlanje kwi-Fair Economics nakwi-Huffington Post. Cofa apha ukuze ufunde:
Malungu aBekekileyo oMphathiswa wezoQoqosho wezoKhenketho eJamani, kunye nabaThunywa be-UNWTO General Assembly:
Phambi kokuphela kweseshoni yangoku yepalamente yaseJamani, ndifuna ukwabelana ngenkxalabo, ethi ngokokubona kwam, yinto engxamisekileyo efuna ukuqwalaselwa kwangoko kunye namanyathelo.
Ndingathanda ukubuza ummeli wethu kwicandelo lezokhenketho ukuba athathe isigqibo esifanelekileyo malunga nokhetho lukaNobhala-Jikelele we-UNWTO kunye nokuqinisekiswa kukaZurab Pololikashvili ,. Eli ayilo phulo, kodwa umba ngowokuba iJamani ihlale ikholwa kwiarhente ye-UN. Makhe ndikucacisele ngokwenzekileyo.
Ileta eqinisekisa uphando olwenziwa yiOfisi yaBatshutshisi yaseJamani eBerlin ngokubhekisele kwizisongelo uTetzel azifumene eGeorgia.
Ndoyikiswa ngefowuni amaxesha amaninzi ngalo myalezo: "Ukuba uyaluthanda usapho lwakho kungcono uyeke nophando." I-ID yomntu obizayo yabonisa inani kwilizwe lase-Georgia. Lowo ufowunayo uyiphindaphindile le bango amatyeli aliqela ngaphambi kokunqamula.
Ndithe xa ndizama ukufowunela le nombolo ndaxelelwa ngesiNgesi nangesiGeorgia, ukuba inamba ibingasebenzi. Ndifake izikhalazo ezimbini malunga "nokungaziwa" kunye namapolisa aseBerlin kunye ne-ofisi yabatshutshisi baseBerlin.
Ndicebise abasemagunyeni baseJamani ukuba esi sisongelo sinokuthi sihambelane nophando lwam kwinkqubo yokhetho lukaNobhala Jikelele we-UNWTO kaZurab Pololikashvili, ngexesha le-105 le-UNWTO Council eMadrid ngoMeyi ophelileyo. Ndipapashe amanqaku aliqela kuQoqosho oluLungileyo nakwiHuffPost ukubhengeza izitenxo ezinxulumene nolu nyulo. Ndiwuxubushe lo mbandela nezopolitiko kwaye ndizamile ukuphanda ngakumbi.
Uphando lwam ngoNobhala-Jikelele ochongiweyo, uZurab Pololikashvili ,, luvelise iinyani ezimangalisayo kunye nokungangqinelani esele kubhaliwe. Umzekelo, kwi-Intanethi, abukho ubungqina bexesha elidlulileyo lomgqatswa, phantse ngokungathi i-Intanethi icociwe ngobomi bangaphambili boNobhala Jikelele we-UNWTO. Nokuba indima yakhe kulawulo lweBhanki ye-TBC, enye yeebhanki ezinkulu zase-Georgia, okanye umsebenzi wakhe wobuphathiswa okanye i-CEO ye-Dynamo Tiflis, awunamkhondo wale ndoda. Kwixesha ledijithali yamanye amazwe, inomdla kakhulu, ngokungathi ubomi bangaphambi kokutyunjwa eGeorgia bususiwe.
Kubonakala ngathi urhulumente wakhe wenze umsebenzi omkhulu wokufihla isazisi sakhe kwi-intanethi.
Unobhala Jikelele we-UNWTO wangoku, u-Taleb Rifai, wazisa inqaku elifanelekileyo xa wayebambe inkomfa noonondaba emva konyulo lwe-12 kaMeyi eMadrid. URifai uthe: "Ilungu lalo livotela umgqatswa." Ekhohlo okungagcinwanga ukuba iziqinisekiso zezesekondari.
Kubonakala ngathi olu lonyulo lumalunga nokwenza isivumelwano sepolitiki. Ilungu legqiza laseGeorgia eMadrid liqinisekisile eyona nto iphambili kwezopolitiko zaseGeorgia (ezingahambelani nezokhenketho) kukufumana isikhundla sikaNobhala Jikelele we-UNWTO. Ngenxa yoku, urhulumente womgqatswa usebenze nzima. Baza kuqhubeka nokufaka uxinzelelo kubathunywa abavotayo. Inkxaso eboniswe lutyelelo olulindelweyo lukaGiorgi Kwirikaschwili kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo iyasebenza, nangakumbi, uxinzelelo kwaye ibonisa isidingo sabo sokuqinisekisa ukuba sibalulekile.
Ewe, wonke urhulumente, kubandakanya iGeorgia, unelungelo lokukhetha owabo ukuba akhokele umsebenzi ophambili kwi-UNWTO. Nangona kunjalo, ukumema abathunywa abavotayo ngexesha lentlanganiso yonyulo kaMeyi kwintengiso yebhola ekhatywayo yobuntshatsheli ayifanelekanga.
Izenzo ezikhohlakeleyo eMadrid aziyonto imfutshane ihlazo, kwaye kubonakala ngathi iyagqunywa. Mhlawumbi izimemo zomdlalo webhola ekhatywayo yindlu yozakuzo yaseGeorgia zithathwa ngokuba “ngamandongomane” kwabanye, kodwa asiyonto ilungileyo ukumema abantu abavotayo ukuba beze kulo mdlalo nomgqatswa kunye nokunconywa ngumgqatswa ofuna abantu abafanayo ukuba bamvotele. Usuku olulandelayo. Abathunywa akufuneki babekho kuluhlu lweendwendwe ezimenyiweyo. Oku ngekhe kwenzeke eJamani nakwamanye amazwe aphucukileyo asentshona.
Umdlalo webhola ekhatywayo unenqanaba eliphezulu lokuzonwabisa kwaye ukuya kulo mdlalo akunakunxibelelana nayo nayiphi na ingxoxo yeshishini okanye intlanganiso yeshishini. Kuba abo bamenyiweyo ngabona bathathi zigqibo kunye nabavoti abaphambili, isithunzi sokuba "siyathengwa" kunye nokuzimisela "ukuthengisa" ivoti kubonakala elubala. Ukuba oku bekusenzeka kumzi mveliso wabucala nawuphi na umphathi wokuthotyelwa uya kuba nengxaki enkulu kulo mbandela.
Yahlukile kwezinye iiarhente ze-UN, i-UNWTO ibandakanya inani elifanelekileyo labachaphazelekayo babucala okanye amalungu adibeneyo. Abaphathi bokuthotyelwa kwala malungu adibeneyo banokuthi babongoze iibhodi ukuba ziburhoxise ubulungu babo kwi-UNWTO. Isenzo samalungu eBhunga leSigqeba le-UNWTO abonise ngokuchasene nokuqondwa komthetho malunga nendlela ekufuneka usebenze ngayo lo mbutho. Kwinkampani yabucala, abaphathi babeya kugxothwa okanye batshutshiswe ngolwaphulo-mthetho kwiimeko ezimbalwa kakhulu.
Omnye wemisebenzi esisiseko ye-UNWTO kukuphumeza iKhowudi yeeNqobo eziseSikweni kuKhenketho. Onke amalungu e-arhente ye-UN ayakuxhasa oku. Ukuziphatha kunye nokufumana igunya lokusebenza njengoNobhala Jikelele ngaphandle kwendlela yokuziphatha. Lo mbuzo kufuneka ubuzwe kuNobhala-Jikelele ocetywayo onyulwe nguZurab Polikashvili. Angathini omnye umthunywa ukuba azithethelele ngokuvotela umntu onje?
Kwixesha elidlulileyo, bendinonxibelelwano oluncinci lomsebenzi kunye ne-UNWTO. Ndiyintatheli ehlala inika ingxelo malunga nozinzo kunye nemicimbi yokusebenzisana kwilizwe liphela. Ndandinomdla kwi-UNWTO ngenxa yonyaka ozinzileyo wokhenketho.
Kutheni le nto ndingazibandakanya kwinkqubo yonyulo ye-UNWTO? Okokuqala, mna nosapho lwam sasisoyikiswa. Ezi zizenzo zolwaphulo-mthetho. Okwesibini, ke ngoko, ndigqibe ekubeni ndingabi ngumbhali-mbali okanye intatheli kuphela kodwa ndibenoluvo.
Into endiye ndadibana nayo kwezi veki zidlulileyo indenze ndathandabuza i-UNWTO. Abameli kwi-General Assembly e-Chengdu kufuneka bathathe isigqibo sokuba bafuna "ukuqhubeka njengesiqhelo" okanye ukuba bafuna isiqalo esitsha. Ngaphandle kokuthembeka, ubuchule kwezokhenketho kunye nokuzimisela kohlengahlengiso, le arhente ayisayi kuthathelwa ngqalelo kwixesha elizayo.
Ke ngoko, ndingakubuza ngokobuqu ukuba uphendule ngevoti efanelekileyo yokungavunyelwa ngumgqatswa waseGeorgia, ovela kwilizwe lethu (eJamani) kwi-General Assembly e-Chengdu, China.
Umhleli kwi-Economics eyintloko
Ukusuka kuMhleli we-eTN: Akuboniswanga nasiphi na isoyikiso esityholwayo uMnu Tetzel ofunyenwe evela eGeorgia unokunxulunyaniswa nomtyunjwa we-UNWTO okanye naseGeorgia. Yonke eminye imiba ephakanyisiweyo kubandakanya umdlalo webhola ekhatywayo uxeliwe kolu papasho amaxesha amaninzi. Kuvavanyo, iipesenti ezingama-91 zokuphendula abafundi beWorldTourismWire bacinga ukuba ukuya kumdlalo webhola kwakulingana nokufumana isinyobo ngenxa yokuvota.
Ukuqokelelwa kobugcisa obutsha obusayinwe nguMona Hatoum kusungulwe ...
Isle of the Dead ifumana i-1.3 yezigidi
Izixeko ezigqibeleleyo zokuthenga: Iindawo ezi-10 eziphezulu zokuba ...